एकाएक किन भाईरल बन्दैछ यो भिडियो ? छोटो समयमै ४ करोडले हेरे (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / समाचार / एकाएक किन भाईरल बन्दैछ यो भिडियो ? छोटो समयमै ४ करोडले हेरे (भिडियो सहित)
एकाएक किन भाईरल बन्दैछ यो भिडियो ? छोटो समयमै ४ करोडले हेरे (भिडियो सहित)
admin December 26, 2021 समाचार Leaveacomment 160 Views
आजभोलि सामाजिक संजाल अन्तरगत विभिन्न कि|सिमका संजालहरू छन्। जसअन्तर्गत हाम्रो परिबेशमा फे`सबुक अत्यन्तै लोकप्रिय संजाल नेटवर्क भित्र पर्छ। सर्वाधिक जनसंख्या`ले यो संजालभित्र जोडिएका छन्।
त्यसगरी पछिल्लो समय यता टिकटक पनि सर्वाधि|क रुचा`इएको सामाजिक संजाल भित्र पर्ने गर्दछ।अधिकांश जनसंख्या जहाँ बुढा`बुढी देखि लिएर केटा`केटीसमेत जोडिएर आफ्नो छोटो कला प्रश्तुत गर्ने साथै अरुले अपलोड गरेका भिडियो तथा गीतमा अभिनय गरेको पर्याप्त भेटिन्छन्।
कतिपय यसको प्रयोग|कर्ताहरू त टिकटकमा आफ्नो विभिन्न भिडियोहरू लगाएर दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराएर भाइरल नै हुने गरेका छन्। यसरी भाइरल हुनेहरूमा केटा|केटी,युवा पुस्ताहरू मात्रै नभएर बुढाबुढी हरू पनि छन। उनीहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी भएतापनी आफ्ना नानीहरूको सहयोगमा अकाउन्ट बनाएका हुन्छन्।
टिकटक हेर्न`को लागि कतिपय सानासाना नानीहरूला|ई पनिबेक किसिमको लत नै बसिसकेको हुन्छ। उनीहरू हेरिरहन तथा गीतहरूमा अभिनय गर्नमा इच्छुक समेत हुने गर्दछन्।
त्यसै|गरी किशोर कोशो|रीहरू पनि शाहसिक टिकटक बनाउने क्रममा विभिन्न ठाउँबाट लडेर मृ’त्युु भएका घटना`हरूसमेत हामीले सुनिरहेका छौँ। त्य|सैगरी यसको दुरुपयोग हुने गरेकाले कतिपय विद्यार्थीहरू यसको नशा बाट बाहिर निस्कन नसक्दा उनी`हरूको अध्ययनमा समेत असर परिरहेको छ।
टिक`टकले यस वर्ष ‘नन–गेमिङ वर्गमा सर्वाधिक डाउन|लोडतर्फ तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ । ह्वाट्सए`प सर्वा|धिक डाउनलोडको पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रो, चौथो र पाँचौंमा क्रमशः मेसेन्जर, फेस|बुक र इन्स्टा`ग्राम रहेका छन् ।
विगत केही वर्ष|अघि देखि निकै नै नेपाली|हरु बिच सामा|जिक संजाल टिक`टक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिस|हरु यहाबाट निकै नै भाइर|ल बनेका छन ।
त्यस्तै कयौ म्युजिक भि`डियो|हरु पनि यहि टिक`टकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन । त्यस्तै अहिले पछिल्लो समय एउटा भिडियो टिक|टकमा निकै नै भाइरल ब`निरहेको छ । टिकट|कपछी यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर फेसबुक तथा युटुब`तिर हालेर खुबै भा`इरल बनाइ`एको छ ।
Previous नुहाउने वित्तिकै नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती,नत्र जरा कम’जोर भएर देखिन’सक्छ यस्तो सम’स्या.. ?
Next बज्यो खतराको घन्टी : खोप लगाएका ४२२ जनामा देखियो ओमिक्रोन